Shengxin Sports akabata maoko Youfa Group, uye ayo zvakanaka mukwanisi mumwe uye kutsvaka nokukurumidza kukura. - China Tianjin Shengxin Sports Goods
Tiine chichiitwa kuvandudzika yavanhu mararamiro uye simba kuwedzera National gym sangano, kugadzirwa michina mitambo zvirokwazvo kuva sunrise maindasitiri, uye musika nzvimbo zvichava zvikuru uye rakafara zvikuru kuva. The chikuru zvinobikwa Youfa Group, welded simbi mutopota, ndiyo huru mbishi mashoko midziyo zvemitambo. Zviri pamusoro nechekumashure ichi kuti Shengxin Sports uye Youfa Group vakabudirira kubudirira pamwe kwakavakirwa nheyo yakawiriranwa complementarity, tose tibatsirwe uye tose tibatsirwe: Youfa Group akaita paakapiwa muna Shengxin Sports uye ane basa vashandi pamwe mupfumi utariri ruzivo. Kugovera yokuitira kuwedzera kushandiswa, zvose nyere kuti simbi zvaidiwa Shengxin Sports zvinotengwa kubva subsidiaries ose Youfa Group.
The pamwe basa iri mukana Shengxin Sports kusimbisa simba rayo uye kuvandudza ayo kukura kwaniso uye kukudziridza nokukurumidza kwete chete. Uyewo chinoshingaira uye kubatsira kuedza kunoitwa Youfa Steel Pipe Industry Chain anomunzwira nomurwizi uye kupinda midziyo yemitambo indasitiri.
Post nguva: Jul-19-2018